Home Ispoortii Atleetiksii
Gootittiin Oromoo atleet Ganzabee Dibaabaa fiigicha meetira 1500'niin rikoordii addunyaa kan cabsite wolmorkii atleetiksii Diamond League guyyaa har’aa Monaakotti geggeeffamen. Rikoordii mt 1500 cabsuuf...
Gama atleetiksiitiin dirree Lausanne (Siwiizerlaand ) irratti wolmorkii oo’atu ture; guyyaa kaleessaa. Atleetonni keenya fiigicha gosa hedduu irraa qooda fudhatan. Irra jireessatti garuu qalbii...
Falamiin mt5000 jidduu dubartootaatti guyyaa har’a magaalaa Paaris dirree Staad di Fransitti geggeeffame irra jireessatti akkuma eeggametti kan xumurame. Fiigichi kuni akkuma durumaa kaase...
Bara kana isaan lamaanuu rikoordii m5000 cabsuuf kan isaaniif hafe sekondii yartuu ture. Erga barri 2015 eegalee atleetonni bebbeekamoon kunniin dirree falamii irratti wolhinqunnamne....